Raisal Wasaaraha Sweden'' Waa inaad Buuxisaa Sharuudahan si aad u joogto Dalka''
HomeWararka CaalamkaRaisal Wasaaraha Sweden” Waa inaad Buuxisaa Sharuudahan si aad u joogto Dalka”
Raisal Wasaaraha Sweden” Waa inaad Buuxisaa Sharuudahan si aad u joogto Dalka”
June 24, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Ra’iisul wasaare Magdalena Andersson ayaa ku nuuxnuuxsatay muhiimadda luqadda iyo aqoonta bulshada Iswidhishka u leedahay la-qabsiga bulshada Sweden.
Andersson ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Instagram-ka maanta ku tidhi “Qof kasta oo Sweden u yimaadda si uu u sii joogo waa inuu buuxiyaa shuruudo cadcad, kuwaas oo ka caawin doona inuu hadhow shaqo helo oo uu ka mid noqdo bulshadayada, markaa dawladdu waxay doonaysaa inay ansixiso luqadda iyo bulshada. shuruudaha aqoonta si loo helo sharciga degenaanshada joogtada ah.”
Hadalka Andersson ayaa imaanaya kadib markii dowlada ay shalay ku dhawaaqday magacaabista guddi baaritaan oo soo baara sida looga baahan yahay luuqada Iswidhishka iyo aqoonta bulshada si ay u helaan deganaansho rasmi ah.
“Muddo dheer, is-dhexgalka Sweden aad ayuu u xumaa,” Andersson ayaa ku tidhi qoraal ay sidoo kale soo dhigtay Facebook maanta. Dhanka kale, socdaalka ayaa ahaa mid muhiim ah. Dad badan ayaan baran Swedish, ma aysan helin shaqo, sidaas darteedna aan ka mid ahayn bulshadayada.”
“Kala soocida qoomiyaduhu waxay gaartay heer aan Sweden ku leenahay jaaliyado is barbar socda. Meelaha ay natiijooyinka tacliintu hooseyso, heerka shaqo la’aantu aad ayay u sarraysaa, in yarna waxay ku hadlaan af Iswiidhish. Dembiyada gaangiska ayaa halkaas ka abuurmay. Taasi waa sababta aan u bedelnay siyaasadeena.”
“Hadda waxaan leenahay siyaasad adag oo socdaalka, isla markaana waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan u wanaajin lahayn isdhexgalka,” ayay raacisay.
Shalay, dowladdu waxay u saartay guddi baaritaan si ay u soo diyaariyaan soo jeedinta shuruudaha aqoonta luqadda iyo bulshada. Soo jeedinta waxaa hadhow lagu kabi doonaa soo jeedinno kale oo ku saabsan shuruudaha adag ee jinsiyadda, ayuu yiri wasiirka socdaalka iyo isdhexgalka Anders Eggman.